Velombelomy hatrany ny voninahitra andro miaraka amin'ny Guns N Roses-tserasera finday slot lalao
Misy vitsy fatorana izay afaka tena hitsangana ny malaza sy malaza Guns N Roses fa na dia ny tarika manana sisin'ny ny azy. Aoka ho headbanging metaly mavesatra na feon-kira mahazatra vatolampy, ny tarika Mamono antoka nahazo ny zo hampifalifaly taranaka ny vatolampy mafy mpankafy. Na ny tarika efa horavàna ny vatolampy mbola hiram-pirenena hatrany laolao ho antsika.
Ny tarika no nandoa ny fanajana ny amin'ny fomba maro. Aoka ho azy miaraka amin'ny kafe tsotra mug na ny T-shirt, ny famantarana eo amboniny izay milaza fa mpiaro ny tarika mametraka azy ho kilasy mitokana. NetEnt Studios antoka izao tontolo izao nandray ny lalao tampoka rehefa nilaza ny slot lalao natokana ho an'ny tarika. Ary ny avy tao amin'ny boaty hevitra no vokany anefa ny tarika sy ny mpankafy tena slot mpankafy mirohotra an-trano filokana rehetra mba hizahanao toetra ny tànany eo amin'ny lalao natokana ho an'ny angano.
Nostalgic sariohatra sy ny Soundtracks
Ny halehiben'ny ezaka ny NetEnt ekipa nataony ho fanorenana izany dia mendrika slot milina miresaka manokana. Koa satria mampiasa ny lalao tany am-boalohany lalamby izay zon'ny mpamorona sy tompony ny tarika, NetEnt maintsy ny tarika ny fahazoan-dalana hampiasa azy teo amin'ny lalao. Fa ny miaramila iray toko sy nanome izany koa ny fahazoan-dalana hampiasa na inona na inona izy ireo nihevitra ilaina sy ny vokatra dia be noho mazava avy ny lalao.
Miaraka amin'ny tarika ny famantarana sy ny malaza kintana toy ny Axl Rose sy ny tavy ny reels sy ny sasany tamin'ny antokon'ny miaramila hira hira indrindra milalao eo andamosiny. Ny slot lalao dia afaka mahazo mpankafy rehetra tamin'ny antokon'ny miaramila nostalgic toy ny Guns N Roses slot lalao dia iray amin'ireo fanomezam-boninahitra tsara indrindra izay azo aloa any amin'ny tarika.
The Guns n Roses slot lalao ihany koa ny manana endri-javatra mahagaga ho azy. Ny lalao dia manana tampon-tanety, manahaka sy multipliers mba hahatonga ny tsatòka atao niverina lehibe. Raha miasa ny tampon-tanety toy ny mahazatra rehetra tampon-tanety aza, manome anao ny manahaka spins maimaim-poana sy ny maro hafa. Ny manahaka ao amin'ny lalao tsy vitan'ny hoe hamaly soa anao amin'ny spins maimaim-poana, fa hanome anao koa ny multiplier tombony arakaraka ny isan'ny aelezo fanehoana an'ohatra no namely.
The Guns N Roses slot lalao dia mihoatra noho ny mety ho fanomezam-boninahitra ny tarika. Miaraka amin'ny sary sy ny Soundtracks tsara izay afaka mahazo anao hieritreritra momba ny miaramila iray toko sy mahafa-po lafin-javatra izay afaka hisintona anao miverina amin'ny zava-misy, ny slot lalao dia tena iray amin'ireo tsara indrindra avy any NetEnt.